WASIIRKA ARRIMAHA DIBADA OO MARKII UGU HOREYSAY KA HADLAY SABABTA UU UGA HADHAY WAFTIGII MADAXWEYNAHA | Saxil News Network
WASIIRKA ARRIMAHA DIBADA OO MARKII UGU HOREYSAY KA HADLAY SABABTA UU UGA HADHAY WAFTIGII MADAXWEYNAHA
Hargeisa (Saxilnews)-Wasiirka Arrimaha dibada Somaliland Maxamed Biixi Yoonis, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegayay in sababta uu uga hadhay weftigii uu hogaaminayay madaxweyne Siilaanyo ay tahay olole siyaasadeed oo la xidhiidha shirweynaha xisbiga KULMIYE oo la qorsheeyay inuu qabsoomo 10-ka bisha October ee fooda innagu soo haysa.
Maxamed Biixi, waxa uu sheegay in aanay jirin wax olole siyaasadeed ah oo uu uga hadhay weftiga madaxweynaha, balse ay tahay arrin dan qaran ah taasi oo ah sidii uu u qaabili lahaa wefti balaadhan oo ka socda shirkadda Mediterranean Shipping Company oo dalka yimid Isniintii todobaadkan, shirkadaasi oo ka mid ah dhawr shirkadood oo u heelan inay maalgashadaan dekedda Berbera.
Wasiir Biixi, oo xalay khadka telefoonka ugu waramay DAWAN, isagoo ku sugan magaaladda Hargeysa waxa uu tilmaamay in ay isku soo beeg-meen bixitaankii wefiga madaxweynaha iyo imaatinka weftigan ka socda shirkadda Mediterranean Shipping Company oo hore qorsheeyay in isagu uu qaabilo. Maadaama oo ay jirtay casuumad ay Somaliland u fidisay shirkadaasi, sidaas darteedna uu isagu u joogay sidii uu u soo dhaweyn lahaa. Waxaanu intaas ku daray isaga iyo xubno kale oo Wasiirro ahi ay maalmaha soo socda ka daba tegayaan weftiga madaxweynaha.
Waxa kale oo uu sheegay in safarka uu madaxweyne Siilaanyo ku tegayo dalka Ireland ay ka soo shaqaysay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland, taasi oo uu ku tilmaamay mid ay ku doonayaan xidhiidh wanaagsan oo dhex mara Somaliland iyo Jamhuuriyadda Ireland.
isagoo faahfaahin ka bixinayay socdaalka madaxweyne Axmed Siilaanyo ku tegayo Irland, waxa uu yidhi “Wasaaradda khaarajiga Somaliland ayaa ka soo shaqaysay arrintaasi oo madaxweynaha Ireland inuu casuumad soo siiyo dawladda Somaliland iyo madaxweynaha Somaliland. markaa wasaaradda khaarajiga ayaa casuumadda uga soo qaban qaabisay madaxweynaha Ireland, in uu soo casuumo madaxweynaha Somaliland.
Aniguna waan tegayaa, oo marti-qaadka uu madaxweynaha Jamhuuriyada Ireland u fidiyay, waxa weeye marti-qaad aad u balaadhan, oo aanu doonayno in aanu cilaaqaad cusub kula yeelano dawladda Ireland”.
Waxa uu sheegay inay la kulmi doonaan madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Ireland iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, iyo sidoo kale jaaliyadda reer Somaliland ee degan Ireland. “Waxaanu la kulmi doonaa madaxweynaha iyo wasiirka khaarajiga ee Jamhuuriyadda Ireland. Waxa kale oo aanu la kulmi doonaa ganacsatada iyo qolooyinkii nabadda ka shaqayn jiray ee Ireland, iyo qaybaha bulshadda rayidka ah ee Irland. Waxa kale oo aanu la kulmi doonaa jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool dalka Ireland, waxaanu tegaynaa magaaladda caasimadda ah ee Babbling” ayuu yidhi wasiir Biixi.
Maxamed Biixi ayaa intaasi ku daray in isaga iyo xubno kale oo wasiirro ahi ay maalmaha soo socda ka daba tegayaan weftiga madaxweynaha, oo ay kaga biiri doonaan magaaladda Dubai oo ay hadda ku sugan yihiin weftiga madaxweynuhu, isla markaana la qorsheeyay inay afarta bisha soo socota u amba baxaan Ireland. Waxaanu yidhi “Waan ka daba tegayaa weftiga madaxweynaha, waxaanan ku biiraynaa aniga iyo xubno kale oo wasiirro ahi maalmaha soo socda, afarta bisha October ee soo socota ayaanu ka baxaynaa Dubai”.
Mar uu ka hadlayay arrinta maalmahan sida weyn la iskula dhex-marayay ee ah sababta uu weftiga madaxweynaha uga hadhay, waxa uu yidhi “Wax allaale iyo wax ka jiraa arrintaasi ma jiraan. Waxaan u hadhay waxay ahayd, oo aan imikana la joogaa oo aanu caawa (xalay) casho u samaynay wefti balaadhan oo ka socda shirkadda la yidhaahdo Mediterranean Shipping Company oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn caalamka, ee danaynaya dekedda Berbera inay maalgashadaan.
Weftigaasi oo tegay magaalooyinka Berbera iyo Tog-wajaale, ayaanu shirar la lahayn aniga iyo wasiirka qorshaynta iyo wasiirka hawlaha guud. Markaa maadaama oo aanu anagu soo marti qaadnay weftigan ka socda shirkaddaasi, waanu ka wada tegi kari waynay. markaa waxaan u joogay shaqadda qaranka, oo ah in aanu dalka ku soo dhawayno dadkaasi aadka u jecel inay ka soo qaybgalaan tartanka dekedda Berbera. arrimo laga tegi karro may ahayn, markaa sidaas ayaan u joogay”.
Waxaanu intaasi ku daray “Weftigani waxay dalka yimaadeen Isniintii todobaadkan, waxay tegeen Berbera, waxaanu geynay magaaladda Tog-wajaale si ay u arkaan jidka iyo xuduudka, maanta (shalay) ayay ka soo noqdeen, caawa-na (xalay) aniga iyo wasiirradda qorshaynta iyo hawlaha guud shirar ayaanu la lahayn, galabta ilaa hadda. Markaa taa awgeed ayaan uga joogay in aan raaco maalintii uu baxayay weftiga madaxweynuhu”ayuu yidhi Md. Biixi.
Wasiirka arrimaha dibadu waxa uu sheegay in shirkadda Mediterranean shipping company ay ka mid tahay shirkaddo doonaya inay maalgashadaan dekedda Berbera. “Mediterranean shipping company waxay ka mid tahay dhawrka shirkadood ee waaweyn ee rabba inay maalgashadaan dekedda Berbera, ee u tartamaya.”